Walgahiin Adda Demokiraatawaa Oromoo Munich Garmen tti gaggeeffame milkiin xumurame
Posted: Waxabajjii/June 15, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (1)
Adda Demokiratawaa Oromoon yaamamee Munich German keessatti kan gaggeeffame walgahii Miseensota, Deeggarrtootaa fi hawaasa Oromoo milkiin xumuramuu isaa oduun achi nu ga’e addeesse.
Walgahii kana irrattis miseensotnii fi deeggartootni Adda Dimokiratawaa Oromoo biyyoota Awurophaa adda addaa, kan akka Norway, Swizerland, Holland, England, Sweeden, France fi magaalota German adda addaa irraa dhufanii kan qooda fudhatan yoo ta’u Hawaasni Oromoo Magaalaa Munich fi naannoo isaa jiraatanis baayyinaan argamanii walgahii kana irraa qooda fudhatan.
Walgahiin miseensota Adda Dimokiratawaa Oromoo sadarkaa Awuroophaa ti Munich Garmanitti waxabajjii 7 bara 2013 gaggeeffame kun Addi Dimokiratawaa Oromoo akka dhaabatti erga dhaabbateen booda Awurophatti kora isa jalqabaa ti. Waan ta’eefis, korri miseensotaa kun diiriirsa caasaa ADO, sagantaa Siyaasaa, heeraa fi seeraa fi akkasumas mul’ata ADOn qabatee irratti hojjechaa jiru irratti gad fageenyaan mar’atee murtee adda addaa dabarsuun xumurachuun isaa hubatame.
Borumtii isaa waxabajjii 8 bara 2013 Walgahii ummataa taasifame irrattis Pirezdantiin ADO Obbo Leencoo Lataa fi Itti anaan isaanii Dr. Diimaa Nogoo dhalootaa fi imala Adda Dimokiratawaa Oromoo, akkasumas ADO dhaabota Biyya Ethiopia irraa maaltu adda akka isa taasisu irratti bal’inan ibsa kennan. Hirmaattota walgahichaa bakka adda addaa irraa afeeramanii dhufan keessaas kanneen akka luba Dr. Tasgaraa Hirphpoo, Dr. Jamal Abbaa Garoo fi kan biroonis dhimmoota adda addaa irratti haasaa taasisuun isaaniis hubatame.
Ummanni walgahicharra tures, gaaffii fi yaada qabu of qusannaa tokko malee dhiheessuun mare bal’aan taasfamee walgahichi akeeka yaamameef guutuun milkiin xumuramuun isaa hubatame.
Wallisaa Ababee Abbashuus halkan sana waleelee warraaqasaa fi bo’aarsaan ummata gammachiisaa turuun isaas duun jarman irraa nu ga’e addeessee ibsa.
Guutummaa walgahii kanaa RBO tamsaasa Waxabajjii 12 bara 2013 darbe irraa dhaggeeffadhaa.
– Adda Demokiraatawaa Oromoo (Oromo Democratic Front)
Jun 17, 13 at 10:24 am
Wow, akkam namati tola!
Oromoota walga’ii ODF irratti hirmaattan hedduu GALTMaa!
Hogganoonni ODF akkasuma umuriin keesan haa dheeratu!